Munchy's Vege Cracker 390gm (12pcs) ~ ICT.com.mm
HomeMyanmar Zarla DistributionMunchy's Vege Cracker 390gm (12pcs)
Munchy's Cream Cracker 300gm (12pcs)Back to Myanmar Zarla DistributionMunchy's Sugar Cracker 390gm (12pcs)
Munchy's Vege Cracker 390gm (12pcs)
Enjoyafeel good snack that loves you back! A light and crispy cracker, baked to be the perfect savoury snack. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ နေရာမရွေး စားသုံးဖို့အဆင်ပြေတဲ့ Munchy’s Vege Cracker မုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ Vege Cracker အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် သက်သက်လွတ်သမားတွေ... [Learn more]
Brand: Munchy'sSKU: 155985N/ASee more: Accessories & Supplies, Food & Beverage, Munchy's, Myanmar Zarla Distribution, New Arrivals, Products, Shop, Under 100kFilter by: Energy Snacks,
Enjoyafeel good snack that loves you back!
A light and crispy cracker, baked to be the perfect savoury snack.
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ နေရာမရွေး စားသုံးဖို့အဆင်ပြေတဲ့ Munchy’s Vege Cracker မုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ Vege Cracker အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် သက်သက်လွတ်သမားတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ Mug ခွက်ထဲမှာ ကွက်တိဖြစ်နေအောင် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် စားခါနီးတိုင်း ချိုးဖဲ့နေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ လှလှပပနဲ့ စနစ်တကျ ထုပ်ပိုးပေးထားတဲ့အတွက် အချိန်တိုင်း၊ နေရာတိုင်းမှာ စားသုံးဖို့အဆင်ပြေတဲ့ Cracker မုန့်ထုပ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက် ၁၂ ခု ပါဝင်ပါတယ်။
Total price:K118,100 K101,300
This item: Munchy's Vege Cracker 390gm (12pcs) K22,100